आइतबार, साउन १७, २०७८ १०:४९:१० युनिकोड पुरानो वेबसाइट
फिजियोथेरोपी भनेको कस्तो उपचार बिधि हो ?
फिजियोथेरोपी भनेको हाम्रो मेडिकलको एउटा शाखा हो । जसमा कोही व्यक्तिलाई बाहिरी रुपमा गाह्रो भयो, हात दुख्यो, ढाड ढुख्यो, नसा च्यापियो अनि कुनै पनि कुराले हिँडडुल गर्न गाह्रो भयो भने त्यति बेला बिरामीलाई गहिराहीमा जाँचिएर बिरामीलाई बिभिन्न तरिकाको व्यायाम गर्न, मांसपेशी उत्तेजक उपकरणहरू प्रयोग गर्ने, केहि जीवनशैली गतिविधिहरू जस्तै हिँड्ने, आसन, आदि सिकाउने, मांसपेशीहरू तन्काउने मेशीनहरु दिएर बिरामीलाई सन्चो पर्ने उपचार हो ।
– फिजियो थेरापीले बिरामीको दुखाई कम गर्नुको साथसाथै, कार्यात्मक क्षमता, सन्तुलनको पुनस्र्थापित गर्न मद्दत गर्छ । हामीहरु जीवनका सबै चरणहरूमा बिरामीहरूलाई सहयोग गर्न प्रशिक्षित छौ । रोग, स्वास्थ्य अवस्था, चोट, वातावरणीय कारक, बुढेसकालका विकारहरू तौल मुद्दाहरू हेर्न सक्षम छौ ।
– हामीहरुले एक समग्र (सम्पूर्ण शरीर) दृष्टिकोण लिन्छांै, बिरामींको भलाईको शारीरिक पक्ष मात्र सम्बोधन गर्दैनौ, तर तपाईंको भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक र सामाजिक कल्याण पनि हेर्छौ । एक फिजियोथेरापिस्टको लक्ष्य भनेको तपाईंको जीवनको गुणस्तर सुधार्नु हो ।
० कस्ता रोगक लागि फिजियो थेरापी जरुरी पर्छ ?
फिजियोथेरापिस्टले विरामीको अवस्था र उसको समस्यालाई हेरेर धेरै रोगहरुको उपचार गर्न सक्छ । जस्तो ः अर्थोपेडिक सम्बन्धी ढाड दुख्ने, कार्पल टनेल सिन्ड्रोम, गठिया, कम पीठ दुख्ने, खुट्टाको अवस्था, साइटिका, घुँडाको अवस्थालगायतको समस्याहरु फिजियो थेरापीबाट ठिक हुन्छ ।
अर्को न्युरोलोजिकलसम्बन्धी अल्जाइमर रोग, मल्टिपल स्क्लेरोसिस, न्यूरोपैथी (स्नायु क्षति), भर्टिगो (चक्कर आउँछ ÷ सन्तुलित महसुस), सेरेब्रल पाल्सी, स्ट्रोक कनेक्सन आदि । औतोइम्मुने ः फिब्रोम्यल्गिया, रायनाउड सिन्ड्रोम, रुमेटियड गठिया, गुइलिन–बार सिंड्रोमलगायत दीर्घकालीन अवस्था जस्तो दम, मधुमेह, मोटोपन, उच्च रक्तचापलगायतका समस्या पनि फिजियो थेरापीबाट ठिक पार्न सकिन्छ । लामो समयसम्म बिरामी पछि अनि रोगले गतिशीलता, सन्तुलनमा असर गर्दैछ, दीर्घकालीन स्वास्थ्य अवस्था जस्तै मधुमेह जस्तो केही पुरानो स्वास्थ्य स्थितिले गतिशीलता र सन्तुलनलाई असर गर्दैछ भने पनि यसलाई फिजियो थेरापीबाट ठिक पार्न सकिन्छ । बिरामीहरूले बुढेसकालको प्रभावहरू विरूद्ध लड्न, स्वस्थ रहनका लागि सीपहरू सिक्न, र लचिलो रहनको लागि फिजियोथेरापी गर्दा शारीरिक तन्तुरुष्टताको महसुस गर्न सक्दछन् ।
० फिजियो थेरापीमा कस्ता कस्ता उपचार विधिहरू प्रयोग हुन्छन ?
फिजियोथेरापीमा प्रयोग गरिने उपचार विधिहरू भनेको मैन्युअल थेरापी । म्यानुअल थेरेपी फिजीओथेरापिस्टहरूद्वारा प्रयोग गरिएको टेक्निक हो, जुन हातको प्रयोगबाट जोड्नेलाई प्रभावित गरी चलाउन र परिचालन गर्न प्रयोग गर्दछ ।
ट्रान्सकुटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्भ उत्तेजना (त्भ्ल्क्) थेरापी – यो एक प्रविधि हो जहाँ सानो ब्याट्रीबाट चल्ने उपकरण छालाको सतहमा राखिएको इलेक्ट्रोडहरूको माध्यमबाट कम ग्रेड प्रवाह पठाउन प्रयोग गरिन्छ । एक त्भ्ल्क् उपकरण अस्थायी रूपमा प्रभावित क्षेत्रको पीडा कम गर्दछ ।
– ड्राइनिडलिङ्ग सुईहरू खास शरीरको बिन्दुहरूमा घुसाइन्छ, जसले छोटो अवधिको लागि दुखाइ कम गर्दछ ।
संयुक्त परिचालन – यस प्रकारको म्यानुअल थेरेपी टेक्निक प्रयोग गरिन्छ जसमा फिजियोथेरापिस्टले जोर्नीहरूलाई विभिन्न गति, गहिराई, र अवधारणामा सामान्य पुनस्र्थापित गर्न परिचालन गर्दछ ।
स्ट्रेच र व्यायाम – फिजियोथेरापिस्टहरूले बिभिन्न व्यायाम र शरीर तान्ने तरिकाहरू सिकाउँछन् ।
सुदृढीकरण कार्यक्रम – फिजियोथेरापिस्टहरूले विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्छन्, र आफ्ना बिरामीहरूलाई स्वास्थ्य र शारीरिक तन्तुरुस्तताको व्यक्तिगत जिम्मेवारीको बारेमा जानकारी गराउँछन् । त्यस्ता कार्यक्रमहरूले बिरामीहरूलाई उनीहरूको समग्र शक्ति, सन्तुलन, समन्वय र लचिलोपनमा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ ।
हाइड्रोथेरापी – हाइड्रोथेरापीले गठियाको उपचारको लागि पानी प्रयोग गर्दछ । एक फिजियोथेरापिस्टको निर्देशन अनुसार पानीको भित्र बिभिन्न ब्यायाम गरिन्छ ।
तातो र चिसो अनुप्रयोगहरू – बरफ, कोल्ड प्याक र क्रायोथेरापी जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोगले बिरामीहरूलाई गम्भीर अवस्थाबाट छुटकारा दिन सक्छ । पुरानो अवस्थाहरूमा फिजियोथेरापिस्टहरूले तातो प्याकहरू, इन्फ्रारेड तातो, डायथर्मी र अल्ट्रासोनिक तरंगहरूको प्रयोग गर्छन् ।
दायरा भित्र गर्ने अभ्यास (च्इः) – गति अभ्यासको दायरा संयुक्त गतिशीलता सुधार गर्न र मांसपेशिको कठोरता कम गर्न प्रयोग गरिन्छ । विभिन्न प्रकारका रोम अभ्यासहरूमा सक्रिय सहयोगी दायरा मोशन (एएआरओएम) अभ्यास र मोशनको सक्रिय श्रेणी (एआरओएम) अभ्यास समावेश गर्दछ ।
नरम उतक परिचालन – नरम उतक परिचालन वा चिकित्सकीय मालिशले कडा मांसपेशीहरूलाई आराम गर्न, पीडा कम गर्न र सूजन कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल उत्तेजना (ल्ःभ्क्) ः यसलाई स्वस्थ विषयवस्तु र एथलीटहरूको लागि शक्ति प्रशिक्षण उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ; यो आंशिक वा पूर्ण रूपमा अचल बिरामीहरूको लागि एक पुनर्वास र बचाव उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
ट्रिगर पोइन्ट रिलिज ः ट्रिगर पोइन्ट रिलिज एक प्रविधि फिजियोथेरापिस्ट यी ढाँचाहरूलाई काउन्टर गर्न प्रयोग गर्दछ । यो उपचारले या त मैन्युअल रूपमा वा ड्राई–सुईल्डिङ्ग, फिजियोथेरापी, मसाज, तातो वा संयोजनको माध्यमबाट लागू गरिएको दबाब प्रयोग गर्दछ ।
औषधीले तपाईंलाई तत्काल राहत दिन्छ तर साइड इफेक्ट हुन सक्छ तर फिजियोथेरापीमा विरामीलाई ठिक हुन अलि लामो समय लग्न सक्छ तर साइड इफेक्ट हुँदैन । फिजियोथेरापीमा चाही बिरामीको अवस्था, दुखाई कम नभएसम्म उपचारका लागि आउनु पर्छ, केहि हदसम्म दुखाई कम भएपछि हामी बिरामीलाई घरमा गर्नको लागि ब्यायामहरु दिन्छौ अनि त्यसपछि ४ –५ दिनको फरकमा फलोअपको लागि बोलाउँछौं र विरामीको अवस्था बुझ्छौं ।
० योग र थेरापीमा के फरक छ ?
फिजियोथेरापी शरीरको शारीरिक समस्याहरू हटाउने उद्देश्यका साथ गरिन्छ, जस्तै पीडा, सूजन, ऐंठन वा कुनै विशेष अंगलाई काँधमा, घुँडा वा तल्लो पछाडि वा घाँटी समस्या लगायत अन्य अङ्गसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिहरू अभ्यास गरिन्छ । आराम गर्दै, मालिश गर्दै, ट्याप गर्दै, ब्यान्डी थेरापीबाट उपचार विधिहरु अप्नाइन्छ । समस्या समाधान भएपछि उपचार रोकिन्छ । योग अभ्यास एक जीवन लामो प्रक्रिया हो, किनकि यो जीवन शैली हो । यो सन्तोषजनक, स्वस्थ जीवनको लागि हो । आसन अभ्यास केवल अंगलाई तन्काउने र आराम गर्ने मात्र नभई दिमागको एकाग्रताका लागि गरिन्छ । अभ्यासको रूपमा प्रदर्शन गरेपछि तपाईलाई ढुक्क महसुस हुन्छ, हल्का तौल र कुनै कार्य गर्न तयार तनावमुक्त । केही आसन फिजियोथेरापी गतिविधिमा समावेश छन् तर उद्देश्य फरक छ ।
० फिजियो थेरापी कतिको खर्चिलो हुन्छ ?
तपाईहरु दुखाई या अरु कुनै अवस्था भएको बेलामा जति सक्दो चाँडो आउनु भयो त्यति नै छिटो दुखाई काम हुनुका साथै त्यति नै चाँडो ठिक हुन्छ । प्राथमिक चरणमा दुखाई कम गर्न छिटोभन्दा छिटो सकिन्छ र खर्च कम लाग्नुका साथै चाडो निको हुन्छ । तर, यदि तपाईहरु दुखेको धेरै समय पछि आउनु भयो भने दुखाई धेरै हुनुका साथसाथै उपचारको समय पनि धेरै लाग्छ अनि खर्च त बढि नै हाल्यो नि ! फिजियो थेरापी मा उपचार गर्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने कुरा विरामीमा भर पर्छ ।
० हड्डी फ्याक्चरपछि जोड्ने केसमा थेरापीको भूमिका कस्तो छ ?
हड्डी फ्याक्चरपछि शारीरिक चिकित्सा अक्सर एक कास्ट वा गोफनद्वारा अस्थिर भइरहेको नकारात्मक प्रभावहरु बढी हुन्छ । ईमोबिलाइजेसनले गति र शक्ति गुमाउन र कार्यात्मक गतिशीलता घटाउन सक्छ । हड्डी फ्याक्चरपछि फिजियो थेरापी तपाइँको कार्यात्मक गतिशीलता सुधार गर्न मद्दत गर्छ । हड्डी फ्याक्चर स्थिर भएपछि फिजियोथेरापी सुरु गर्नुपर्दछ । फ्याक्चर उपचारको समयमा फिजियोथेरापी ध्यान केन्द्रित गर्दछ । उपचारलाई बढावा दिँदै, वजन असर प्रोत्साहित गर्दै, कमजोर मांसपेशीहरूको शक्ति कायम राख्दै, प्रभावित र वरपरका जोर्नीहरूको आवागमनको दायरा कायम राख्दै, पीडा कम गर्दै, सूजन कम गर्दै फिजियोथेरापिस्टले यसरी काम गर्छ अनि विरामीको फ्याक्चर निको भएपछि विरामीको कास्ट हटाइए पछि फिजियोथेरापी ३–१२ महिनासम्म विरामीले विगतको जस्तै सामान्य अवस्था नआउन्जेलसम्म जारी रहन्छ ।
० पर्लियसस बिरामी पनि थेरापीबाट ठिल हुन्छ ?
– दैनिक फिजियोथेरापीले त्यस अंगमा धेरै हदसम्म आन्दोलन र सनसनी बहाल गर्न मद्दत गर्दछ जहाँ पक्षघात स्ट्रोक वा ट्रान्जियन्ट इस्केमिक आक्रमण जस्ता कारकहरूको कारण भएको हो । धेरै जसो, फिजियोथेरापीको माध्यमद्वारा पक्षघातको अंतर्निहित कारणको उपचारले प्रभावित शरीरको भागमा गतिशीलता बहाल गर्न सक्दछ । पर्लियससहरु पनि धेरै तरिका हुन्छ जस्तै टेम्पोररी पर्लियसस स्त्रोके, वेल्स पल्स्य जस्ता अवस्थाहरु निको हुन सक्छ ।
० महामारीको रुपमा रहेको कोरोना भाइरसका बिरामीहरुको हकमा चाहिँ फिजियो थेरापी उपयोगी हुन्छ कि हुदैन ?
फिजियो थेरापी कोरोना संक्रमित बिरामी उपयोगी हुन्छ । कोरोना भाइरसले संक्रमित बिरामीहरु लामो समयसम्म आईसीयुमा बसेका बिरामीहरू एकदम कमजोर हुन सक्छन् । यसमा फिजियोथेरापिस्टको भूमिकाको एकदमै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यस्ता बिरामीहरूलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन फिजियो थेरापीले मद्दत गर्दछ । यसको मतलब व्यायाम गर्नुका साथै सँगै बस्नु र यी बिरामीहरूसँग हिँड्नु पनि हो । कोभिड—१९ को परिणाम स्वरूप गम्भीर श्वास विफलता भएका धेरै बिरामीहरू सास फेर्ने मेसिनमा हुन्छ । कसैलाई ’एचयलष्लन’ आवश्यक छ – वा तिनीहरूलाई आफ्नो पेटमा फर्काउने – जुन मानिसहरूलाई उनीहरूको फोक्सो सफा गर्न मद्दत गर्ने, साथै फोक्सोको क्षमता र अक्सिजनस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । यसको साथै बिरामीहरुलाई सास फेर्न मद्दत गर्ने प्रविधी, खोकी निकाल्ने प्रविधी आदि फिजियोथेरापीबाट गराइन्छ ।
० नेपालमा फिजियो थेरापीको अवस्था कस्तो छ ?
नेपालमा फिजियोथेरापीको अवस्था भर्खर भर्खर विकसित हुँदैछ । हुन त पहिलाभन्दा धेरै मानिसहरुलाई थाहा भइसकेको अवस्था छ । तर मानिसहरुमा एउटा गलत धारणा के छ भने दुखाई भयो भने पहिला घरमै निको गर्ने अनि अति नै दुख्यो सहनै नसकिन अवस्था आएपछि मात्र अस्पताल आउने गर्छन् । मानिसहरुले फिजियोथेरापी भनेको करेन्ट मात्र सोच्नु हुन्छ, तर त्यसो होइन फिजियोथेरापी अन्तर्गत धेरै कुरा आउँछ । यो कस्तो उपचार विधि हो ? यो हाम्रो दैनिक जीवनमा शरीरमा परेको समस्या समाधानका लागि अतिआवश्यक रहेछ भन्ने जानकारी गराउन सकियो भने फिजियो थेरापीको अवस्था धेरै राम्रो छ ।
० सुमेरु अस्पतालमा कस्ता—कस्ता विरामीहरु आउने गर्छन् ?
सुमेरु अस्पलतालमा धेरै जस्तो हात दुखेको, ढाड दुखेको, टेम्पोररी पर्लियससहरु, खुट्टा दुखेको, स्त्रोके केस अनि ट्रिगर पोइन्टको समस्या लिएर विरामीहरु आउने गर्छन् । ट्रिगर पोइन्टहरू असक्रिय, फोकल, हाइपरिटेबल स्पटहरू स्केटल मांसपेशीको टाउट ब्यान्डमा अवस्थित छन् । तिनीहरूले स्थानीय र सान्दर्भित ढाँचामा पीडा उत्पन्न गर्छन् र अक्सर पुराना मस्कुलोस्केलेटल डिसआर्डरको साथ हुन्छन् । हाम्रोमा म्यानुअली हातले गर्नुका साथसाथै अरु तरिकाहरुले पनि उपचार गर्ने गर्छौ ।
० फिजियो थेरापीमा सबै भन्दा ठुलो चुनौती के होला ?
फिजियो थेरापीमा कस्तो हुन्छ भने बिरामीहरु समस्या लिएर आउनुहुन्छ तर निको नभएसम्म उनीहरुलाई फिजियो थेरापी गर्नुपर्छ । फिजियो थेरापीको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बिरामीलाई आफुप्रति भरोसा दिलाउनु हो । किनभने धेरै समयसम्म निको भएन भने बिरामीहरुको मानसिक क्षमता कम हँुदै जान्छ । अनि आफुले गर्न सक्छ भनेर भरोसा लाग्दैन अनि आशा छोड्न थाल्छ त्यसो भएर फिजियोथेरापिस्टको बोलि सारै मिठो हुनुका साथै काउन्सेलिङ्ग एकदमै राम्रो हुनुपर्छ अनि मात्र बिरामीहरुलाई आफुप्रति विश्वास दिलाउन सक्छौ ।
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ३१, २०७८, १५:१८:००